Wararka Maanta: Arbaco, Feb 17, 2021-Faysal Cali Waraabe “Madaxweynaha faragalinta jooji baanu leenahay”
Arbaco, Febraayo, 17, 2021 (HOL)- guddoomiyaha xisbiga mucaarad ka ah ee UCID ayaa madaxweyana Somaliland ku eedeeyay in uu faragalin ku hayo, hab sami u socodka doorashada, isagoona ugu baaqay in uu soo daayo, musharixiin ay dowladu ka xidhay xisbigiisa.
Faysal oo ka hadlayay xaflad uu xisbigiisu lahaa, ayaa sheegay in diwaan galintii doorashadu ay sifiican u qabsoontay laakin uu ka cabsanayo in dhibaato hor lihi ka timaado xadhig lagula kacay musharixiin xisbigiisa ka tirsan.
“Waxa inoo dhacday diiwaangalin wanaagsan, oo sifiican u dhacday, oo dadku sifiican isku soo abaabuleen, laakin laba wax baa nagu soo baxay oo , laba musharaxna waa nalaga xidhay, wax allale wax ay gaysteena anay jirin, musharax kalena xeer ilaaliyihii baa u diiday warqadii danbi la’aanta, labada arimood waxay tusayaan in aynu la kulmi doono dhibaato Alle haynaga hayee”. Ayuu yidhi guddoomiyuhu.
Sidookale guddomiyaha ayaa madaxweyne Muuse Biixi ku eedeeyay in uu faragalin ku hayo habsami u socodka doorashada, isla markaana ugu baaqay madaxwaynaha in uu soo daayo musharixiinta xidhan.